Fadlan Kaalin ka qaado Dhismaha Masjidka.
Loading...	Home Wararka Fadlan Kaalin ka qaado Dhismaha Masjidka.
Fadlan Kaalin ka qaado Dhismaha Masjidka.	Monday, 09 April 2012 22:43	Waxaa si Naxiirs leh looga Codsanayaa dhamaan dadka Muslimiinta ah in ay Gacan ka gaystaan dhis maha Masjidka Sheekh Cabdi ee Cali Kamiin kasoo dib u dhis lagu bilaabay Waxaana Gudiga Dhismaha Wada ay ka codsanayaan dhamaan Dadka Muxsiniinta ah ay Gacan ka keystaan.
Qof walba waxaa uu bixin karaa waxii awodiisa ah asaga oo Sadaqo Jaariya ah u Noqon doonta Waxaana Mar labaad laga Codsanayaa Muxsiniinta Sadaqada Jecel in ay ku soo shubi karaan waxii ay saqadao u baxsadeen Koontada Hoos ku qoran .
ACCOUNT NO: MUQ 123122117.
Comments (1)	illaah ha fududeyo dhismaha masjidka insha allah	1
Tuesday, 24 April 2012 16:38	hussein omar	ilaah ha fududeyo dhismaha masjidka wax ka fican malaha in beydka alle ladhiso aniga aadan ugu farxay runti in dib lo dhiso masjidka masha allah aniga kalin teyda aan ka qaadan karo waa inaan u duceyo inta dhiseysa masjidka maxa yelay aniga wan jeclan laha inan kalin muhim ah ka qaato dhismaha masjidka lkn dhaqalo an uga qeyb qato ma haysto lkn waa u duceyna in dhismaha masjidka lagu guleysto insha allah